६३ औं प्रहरी दिवस : किन मौन बसे गृहमन्त्री ? - Everest Dainik - News from Nepal
६३ औं प्रहरी दिवस : किन मौन बसे गृहमन्त्री ?
६३ औ प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सम्बोधन गरेनन्।
बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सम्बोधन गरे । विभागीय मन्त्रीका हिसाबले बोल्नै पर्ने हैसियतमा रहेका गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन् ।
समय अभाव भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले सम्बोधन गरेपछि आफूले बोल्नु सान्दर्भिक नहुने भन्दै उनले उक्त समारोहलाई सम्बोधन नगरेका हुन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति स्थापनाका लागि प्रहरीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै जनतासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन आग्रह समेत गरे।
महानिरीक्षक खनालल एकदुई जनाका असफलतालाई सिंगो संगठनसँग जोड्न नहुने बताए। उनले एउटा मुद्दामा पूरै प्रहरी संगठनलाई जोड्दा इमान्दार प्रहरीको मानमर्दन हुने बताए।
ट्याग्स: 63th Police Day